Elliott လှိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုတာ ဘာအကြောင်းအလဲ?
သင်သည် Elliott လှိုင်းများအကြောင်း ကြားဖူးခြင်း (သို့) လှိုင်းအရေအတွက်များကို မြင်ဖူးခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ယနေ့ခေတ်အခါတွင် Elliott လှိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် Forex ဈေးကွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၏ လူကြိုက်အများဆုံး နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲ? Elliott လှိုင်းနိယာမသည် ကျွန်တေ်ာတို့အတွေ့အကြုံတွင် လစဉ် (သို့) နှစ်စဉ်ဇယားများကနေတောင်မှ တစ်-မိနစ် နေ့တာအတွင်းကာလအထိ အချိန်ကာလတိုင်းပေါ်ရှိ ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကို ဖြေရှင်းဖော်ထုတ်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောကိရိယာဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ တစ်နေ့တာအတွင်းဇယားများတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်ပေမယ့်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပိုကြီးသောရုပ်ပုံကားချပ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာထားရပါမူ၊ Elliott လှိုင်းများသည် ဈေးကွက်၏ DNA (မျိုးဗီဇ)ဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါဆောင်းပါးများတွင်၊ Elliott လှိုင်းနိယာမမှတဆင့် လမ်းညွှန်ပေးသွားပါမည်။ စလိုက်ရအောင်။
စာရေးသူက ဘယ်သူလဲ?ကျွန်တော်တို့သည် စာရင်းကိုင်နှင့် စီးပွားရေးပါရဂူဖြစ်သူ Ralph Nelson Elliott (၁၈၇၁ - ၁၉၄၈) ကို ကျေးဇူးတင်စကားများစွာ ပြောသင့်ပါသည်။ ၁၉၃၈တွင်၊ 'လှိုင်းနိယာမ (The Wave Principle' ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ သူ၏ ဒုတိယစာအုပ် 'ဓမ္မတာတရား - စကြဝဠာ၏ လျို့ဝှက်ချက် (Nature's Law - The Secret of the Universe)' အား ၁၉၄၆တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ Elliottသည် အလွန်ထင်ရှားစွာသတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများအရ ဈေးကွက်တွင် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသော ပုံစံများကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တေ်ာတို့သည် ယနေ့ခေတ်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ၏ အခြေခံအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော 'Elliott လှိုင်းနိယာမ: ဈေးကွက်ပြုမူလုပ်ဆောင်ပုံ' စာအုပ်အတွက် Robert R. Prechter Jr. နှင့် A.J. Frost တို့အားလည်း ကျေးဇူးတင်သင့်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၂၀၀၆တွင် D.V. Voznyမှ 'Elliott၏ ကုဒ်' - နောက်ထပ်အထင်ကရ စာအုပ်ကြီးကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ကံဆိုးချင်တော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ စာဖတ်သူအတော်များများအတွက် ဤစာအုပ်သည် ရုရှားဘာသာဖြစ်နေပါသည်။
ဆောင်းပါးများ၏ အခန်းဆက်သည် စာအုပ်နှစ်အုပ်ပေါ် အခြေခံထားပါသည်။ မည့်သည့်ဆောင်းပါးပါ မည်သည့်စည်းမျဉ်း (သို့) လမ်းညွှန်မဆို ဤထုတ်ဝေမှုပါ စည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ ပြီးတော့ စိတ်ချပါ၊ ကျွန်တော်က စာအုပ်ကို ပြန်ပြောင်းပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တကယ်လုပ်မဲ့အရာကတော့ သင့်ကို Elliott လှိုင်းနိယာမကို သင်ပေးပြီး၊ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သာဓကအများဆုံးကတော့ တကယ့်ဈေးကွက်မှဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ စာအုပ်ထဲမှာမဖော်ပြထားပေမယ့်၊ ဇယားတွေမှာရှာတွေနိုင်မည့် အခြေအနေတစ်ချို့ကိုလည်းဖြတ်သန်းရပါလိမ့်မည်။
Elliott လှိုင်းနိယာမတွင် အဓိကအကြောင်းရာနှစ်ခုရှိသည်: တွန်းအား (impulses) (လှိုင်း-၅ခု ဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှု) နှင့် ပြင်ဆင်ချက် (corrections) (လှိုင်း-၃ခု ဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှု)။ ဤအကြောင်းအရာအား နောက်ဆောင်းပါးများတွင်ပြန်ပြောမည်ဖြစ်သည့်အတွက် သင်သည် တွန်းအား(impulse)ဖြစ်သည့် အဓိက LEGO အတုံးတစ်ခုသာရှိကြောင်း သင်မြင်ရလိမ့်မည်။ အခုတော့၊ ဤနှစ်ခုသူများအပေါ် အာရုံစိုက်ရအောင်။
အောက်ပါဇယားကို ကြည့်ပါ။ သင်သည် တွန်းအားလှိုင်းဖြစ်သည့် - လှိုင်း-၅ခု ကျဆင်းမှုကိုမြင်နိုင်ပါသည် (လှိုင်း-၅ခု ပြင်ဆင်ချက်ရှိနိုင်သည့်အခြေအနေများလည်းရှိတတ်ပေမယ့်၊ ယင်းအကြောင်းအရာကို နောက်မှဖော်ပြပေးပါမယ်)။ ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုဟု ယူဆနိုင်သည့် လှိုင်း-၃ခုရှိပါသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ တွန်းအားနှင့် ပြင်ဆင်ချက်ကိုတွေ့ပြီးပြီဖြစ်သည့်အတွက် နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ရုပ်ပုံတွေကို ကြည့်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။
နောက်ထပ်ဇယားသည် ကျွန်တော့်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ပို့စ်တင်ထားခဲ့သည့် စစ်မှန်သောလှိုင်းအရေအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ အထက်သို့ရုတ်တရက်ခုန်တက်ခြင်းသည် ၎င်း၏ စတုတ္ထမြောက်လှိုင်းတွင်ဖြစ်စဉ်၊ ကျဆင်းမှုသည် အကျတွန်းအား၏ တတိယလှိုင်းတွင် ဖြစ်ဟန်တူသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အောက်ပါအတိုင်း နိဂုံးချုပ်နိုင်ပါသည်: အခြားအရာများကနေ ကင်းကွာနေနိုင်သည့် လှိုင်းရယ်လို့မရှိပါဘူး။ Elliott လှိုင်းနိယာမသည် အစုံလိုက်ထပ်ထားရသော ရုရှားမိန်းမလှအရုပ် (Matryoshka)နှင့်တူသည်။ လှိုင်းတစ်ခုစီသည် အခြားလှိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပေမယ့်၊ လှိုင်းတစ်ခုစီတွင် ပိုသေးသောလှိုင်းများပါနေတတ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းသည် ပိုကြာရာမှ ပိုတိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလများဆီမှာ ဖြစ်ပျက်တတ်သည်။
ထိုအရာကပဲ Elliott လှိုင်းနိယာမအား အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာ ဈေးကွက်သုံးသပ်မှုများကနေ ကွဲထွက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ နည်းပညာသုံးသပ်ချက် လုပ်နည်းကိုင်နည်းအများစုမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဝင်မစွက်ဖက်(မပါဝင်)သည့် ပုံစံနှင့် အချက်ပြချက်များအပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။ EWP၏ ပါဝါမှာ သီးသန့်တည်ဆောက်ထားတာကို မဟုတ်ဘဲ၊ ပိုကြီးသောရုပ်ပုံများကို ကြည့်ရန်တတ်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။
အရောင်းအဝယ်မှာ EWPကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက၊ တစ်ခုထက်ပိုသော လှိုင်းအရေအတွက်များကို နားလည်လာမည်ဟု ကြားဖူးမှာပါ။ များသောအားဖြင့်၊ သင့်တွင် တစ်ခါတစ်ရံ ဝိရောဓိဖြစ်နိုင်သည့်၊ အနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြေအနေများရှိပါသည်။ ဒါဟာ ချက်စ်(chess) ကစားနေရသလိုပဲ EWPအကြောင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အချို့ရှားပါး အညွှန်းကိန်းများမှ သင့်အား ဝယ်ရန်(သို့) ရောင်းရန်ပြောပါက၊ တစ်ခုခုသာမှားသွားပါက သင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို တွေးတောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ EWPနှင့်ဆိုရင်၊ ဘယ်လှိုင်းအရေအတွက်သည် နေရာမှာရှိနေလဲဆိုသည့်အပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်းအဝယ်လှုပ်ရှားမှုများကို အဖြေရှာရန်သင်ကြိုးစားမှာပါ။ ဒါဟာအောင်မြင်သော ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦး၏ အဓိကအရည်အသွေးပါပဲ။
တကယ့်ဇာတ်ကြောင်းအချို့ကိုသွားလိုက်ရအောင်။ ပထမသာဓက ကတော့ DJI အညွှန်းကိန်းပါ။ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆တွင်၊ အညွှန်းကိန်းသည် ရာဇဝင်တွင်သည့်အမြင့်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တေ်ာသည် အတော်လေး အတက်လှိုင်းအရေအတွက်ကို တင်ခဲ့ပါသည်။ ပဉ္စမမြောက်လှိုင်းသည် ကျော်လွန်ပြီးအဝေးကြီးဖြစ်နေသည့်အတွက် ကျွန်တော်သည် ဈေးကွက်ကို ပိုမြင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။
လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ ဈေးကွက်သည် ပိုပြီးတောင် အမြင့်ကိုတက်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ အတက် (bullish) ဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ ဒီမျှော်မှန်းချက်မျိုးသည် ကျွန်တော်တို့မကြာခင်လေ့လာမည့် EWP ရှိအချို့အရာပေါ်တွင် အခြေခံနေပါသည်၊ ခုအတွက်တော့၊ ဒါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ သင်တွေ့ရပါမည်။
ထို့ကြောင့် ဈေးလမ်းကြောင်းသစ်သည် အတက်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လက်ရှိလှိုင်းအရေအတွက်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။
ဒုတိယဇတ်ကြောင်းကတော့ USD/TRY ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆တွင်၊ စတုထ္တလှိုင်းသည် တြိဂံအနေအထားဖြင့် အပြီးသတ်သွားပုံရသည့်အတွက် နောက်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည့် နောက်ထပ်အတက်တွန်းအားကို မျှော်လင့်ခဲ့ပါသည်။
အကျပြင်ဆင်ချက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီး၊ အတက်ဈေးလမ်းကြောင်းသည် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ဆက်တက်ခဲ့သည့် ဇာတ်ကြောင်းအရှည်ကြီးရှိခဲ့ပါသည်။
နောက်ဆုံးတော့၊ ဧပြီ ၂၀၁၈တွင် လှိုင်း ၄ အဆုံးသတ်နိုင်ခြေရှိသည့်အတွက် နောက်ထပ်အတက်အချိန်ကာလရှိခဲ့ပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ဈေးကွက်သည် ပိုပြီ်းတောင်မြင့်တက်သွားခဲ့သည်။
ဆိုးရွားတဲ့သာဓကများလည်း ရှိပါသေးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အရောင်းအဝယ်အကြောင်း ပြောပါက၊ သင့်လှိုင်းအရေအတွက်အရ ဈေးကွက်သည် ဈေးလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်ရွေ့လျှားနေသည့်အခါ သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် EWPကို ဈေးကွက်တွင် အခွင့်အလမ်းများရှာရန် ကြီးမားသည့်ကိရိယာအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထပ်လောင်းဆိုရသော်၊ သင်လေဘယ်လ်တပ်ထားသည့် (သို့) ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်မြင်သည့် မည်သည့်လှိုင်းကိုမဆိုရောင်းဝယ်ရန် သင့်အတွက်တာဝန်မရှိပါဘူး။ အရောင်းအဝယ်ဖွင့်ရန်အချိန်ကောင်းရှိသည့်အခါ အကောင်းဆုံးအရေအတွက်များကိုသာ ရောင်းဝယ်သင့်ပါသည်။ တနည်းဆိုရသော် တောထဲမှာ မုဆိုးတစ်ဦးလို အချိန်ခါကောင်းကို စောင့်ဆိုင်းသင့်ပါသည်။ အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့၊ ၎င်းကိုအအောင်မြင်ဆုံး ရောင်းဝယ်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
ဒါဟာ အစပဲရှိပါသေးတယ်။ နောက်ထပ်ဆောင်းပါးများတွင်၊ EWP၏ ပိုတိကျတဲ့ စည်းမျဉ်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များအကြောင်းသွားပါမည်။